सिद्धार्थ बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ८ पुस २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण सिद्धार्थ बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ८ पुस २०७५)
on: December 23, 2018 कम्पनी विश्लेषण, लगानी
सन् २००२ मा स्थापित यस कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक यात्रामा लगातार सफलता हासिल गरेको छ । कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत बोनस शेयर र ८ दशमलव १६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि वितरण गरिनेछ । कम्पनीले लाभांशलगायत विविध प्रस्ताव पारितका लागि पुस २३ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सभा प्रयोजनका लागि पुस ९ गते १ दिन बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बुक क्लोजभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम सदस्यले साधारणसभामा सहभागी हुन पाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । हाल कम्पनीको रू. १ हजार मूल्यको २२ लाख ५० हजार कित्ता ऋणपत्र विक्रीमा रहेको छ । कम्पनीले ७ वर्षे अवधिको १० दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरी एसबीएल डिबेन्चर २०८२, ऋणपत्र जारी गरेको हो । मंसिर २३ गतेदेखि विक्री खुला भएको यो ऋणपत्र खरीदका लागि पुस २३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म ऋणपत्र खरीदका लागि दरखास्त गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
कम्पनीको चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आव २०७५/७६ र २०७४/७५ बीच तुलना गर्दा :
कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ८ अर्ब ४६ करोड ४३ लाख ८५ हजार चुक्तापूँजी पु¥याएको छ । गत वर्ष बोनस र हकप्रद जारी गरी कम्पनीले पूँजी वृद्धि गरेको छ ।
यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा रू. ५२ करोड ५० लाख ७५ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीको वितरण योग्य नाफा रू. ३१ करोड १५ लाख ८९ हजार रहेको छ । खुद नाफामा गत वर्षभन्दा ४३ प्रतिशतले र वितरण योग्य नाफामा १३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
कम्पनीको जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा साढे १६ प्रतिशत बढेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा रू. ४ अर्ब ८२ करोड ७६ लाख २८ हजार रहेको जगेडा कोष रकम यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा रू. ५ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख २९ हजार रहेको छ ।
कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा गत वर्षभन्दा २८ दशमलव ७४ प्रतिशत बढी रू. १ खर्ब २५ करोड ३१ लाख ४० हजार निक्षेप संकलन गरेको छ भने ३० प्रतिशत बढी रू. ९० अर्ब ६७ करोड ५ लाख १२ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
गत वर्षभन्दा करीब १ सय २२ प्रतिशत बढी रू. ३ अर्ब ७ करोड ७३ लाख ८२ हजार ब्याज आम्दानी गरेको कम्पनीले गत वर्षभन्दा १ सय ८३ दशमलव ५१ प्रतिशत बढी रू. १ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख ८ हजार ब्याजमा खर्चिएको छ ।
पूँजीकोष लागत ७ दशमलव २० प्रतिशत रहेको कम्पनीको पूँजीकोष पर्याप्तता १२ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत रहेको छ ।
निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत रहेको थियो ।
पहिलो त्रैमासमा प्रतिशेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ ८१ पैसा, मूल्य आम्दानी अनुपात १३ दशमलव ५८ गुणा, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य १ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ १८ पैसा, प्रतिशेयर नेटवर्थ १ सय ६६ रुपैयाँ ४९ पैसा र तरलता अनुपात २१ दशमलव ७३ रहेको छ ।
कम्पनीको ५९ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिममा इन्भर्टेड ह्याम्मर आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले शेयरमूल्य बुलिस ट्रेण्डमा रिभर्सल हुने संकेत देखाउँछ । विश्वसनीयता भने सामान्य रहेको छ । आरएसआई न्युट्रल जोन ४९ दशमलव ०२ विन्दुमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन ३ दशमलव १८ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखिम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेजमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । यी दुई रेखाभन्दा हालको मूल्य माथि छ । बिहीवारको शेयर मूल्य रू. ३ सय १४ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. ३ सय २२ मा प्रतिरोध र मूल्य सस्तिएमा रू. ३ सय २ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।